Neymar Jr oo fariin cusub u diray kooxda Barcelona – Gool FM
Dajiye August 26, 2019
(Paris) 26 Agoosto 2019. Xiddiga kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Neymar Jr ayaa siiyay calaamad cusub kooxdiisii ​​hore ee Barcelona si ay u qaadaan talaabo cusub ay markale kula soo saxiixan karaan isaga, kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga.
27 jirka reer Brazil ayaan ka fikireynin xiligan la joogo kaliya waxaan ka aheyn inuu ka tago Paris Saint-Germain, wuxuuna sidaas u xaqiijiyay saaxiibada isaga u dhow, inuusan markale u i ciyaari doonin PSG.
Barcelona ayaa ah Kooxda ugu cad cad ee la saxiixan karta Neymar Jr, gaar ahaan maadaama xiddigan dooqiisa koowaad ay tahay Blaugrana, wuxuuna rajeenayaa inuu markale ku laabto garoonka Camp Nou.
Wargeyska “Sport” ee gobolka Catalonia ayaa xaqiijiyay maanta oo Isniin ah in Neymar Jr uu siiyay calaamad cusub kooxda Barcelona si ay markale ula saxiixdaan isaga.
Neymar Jr ayaa ku soo bandhigay baraha bulshada sawirada qaar ka mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona, kaddib guushii weyneyd ay xalay kaga gaareen kooxda Real Betis horyaalka La Liga ee dalka Spain.
27 jirka reer Brazil ayaa kaddib markii uu dhamaaday kulankii xalay ee kooxaha Barcelona iyo Real Betis wuxuu like ku saaray boggiisa rasmigaha ee Instagram-ka sawirada xiddigaha Griezmann iyo Sergi Roberto oo u dabal degaya guusha ay ka gaareen Real Betis, taasoo ka dhigan inay tahay calaamad u muujineysa maamulka Blaugrana sida uu u doonayo in markale uu dib u soo laabto.